Nzira yekudzivirira muchengeti kupera simba - Wellness | Chikunguru 2021
Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Info Info Nharaunda, Wellness Zvinodhaka Vs. Shamwari Info Info, Hutano Dzidzo Zvinodhaka Info Dzidzo Yehutano Kambani, Iyo Checkout Hutano Dzidzo, Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Nhau Hutano Dzidzo, Hutano Nharaunda, Kambani Kambani
Kuru >> Wellness >> Nzira yekudzivirira muchengeti kupera simba
Zvinogona kupa mubayiro kubatsira mudiwa. Paunenge uchichengeta shamwari kana nhengo yemhuri, iwo mukana wekushandisa nguva pamwe chete, uye nekusimbisa hukama hwenyu. Vanhu vaunoda vari pamba uye vanochengetwa zvakanaka, izvo zvinogona kuisa pfungwa dzako nyore. Izvo zvine chirevo uye zvinogona kutopa pfungwa yekuita-asi hazvisi zvisina matambudziko, imwe yacho ndeye muchengeti kupera simba.
Vanopfuura mamirioni makumi matanhatu nemashanu vanhu (29% yevaAmerican) vanopa chengeto isingabhadharwe yeanogara achirwara, akaremara, kana nhengo yemhuri yakwegura kana shamwari chero gore ripi zvaro, sekureva Muchengeti Action Network . Vazhinji vanochengeta vakadzi, vazhinji vacho vanoshanda basa renguva yakazara mukuwedzera mukupa kuchengetedzwa kwekuenderera kumba kwemumwe munhu wavanoda. Zvinogona kunetsa, kushungurudza, uye kunetesa.
vyvanse inogara kwenguva yakareba sei pazuva
Kana iwe ukaneta kusvika padanho remuchengeti kupera simba, zvinogona kuwedzera mukana wako wekushungurudzika uye mamwe matambudziko ehutano, kusanganisira chirwere chemoyo uye yakakwira BP. Asi kana iwe uchiziva zviratidzo zvekutsvaga, unogona kudzivirira mamiriro akajairika.
Chii chinonzi muchengeti kuneta?
Kuneta kweanochengeta inzira yekuneta kwepfungwa, kwemweya, uye kwemuviri, kunokonzerwa nekuwedzera uye kwenguva refu kunetseka kwekutarisira kweanorwara kana akaremara mudiwa kana vakuru vakuru. Zvinogona kuitika kana iwe uchinzwa kuremerwa uye uchitenda kuti haugone kuzadzisa zvido zvemuchengeti, maererano ne American Moyo Sangano . Vanhu vasingagamuchire rutsigiro kana ruyamuro kubva kumabasa avo evachengeti vane mukana wakanyanya wekusimudzira kuneta kwevachengeti. Zvimwe njodzi zvinhu zvinosanganisira:
Kugara nemunhu wauri kutarisira
Kusasangana kwevanhu panzvimbo imwe
Matambudziko emari kana mashoma einishuwarenzi ekurapa kufukidza
Dambudziko nekugadzirisa matambudziko uye hunyanzvi hwekugadzirisa
Kusava nesarudzo mukuva muchengeti
Kuregeredza zvako zvemuviri, zvepamoyo, uye zvekurapa zvaunoda
Huwandu hwemaawa anopiwa pakuchengeta vhiki rega rega hunokanganisa njodzi yekuneta kwevanochengeta. Iyo yakakwira iyo nhamba yemaawa anoshandiswa semuchengeti, iyo inowedzera njodzi.
Zviratidzo zvekuchengeta kuneta
Vanhu vazhinji havabvume zviratidzo zvekuchengetwa kwevachengeti nekuti vanga vajaira kuramba vachinzwa kuneta uye kushushikana. Vamwe vanogona kusava nehanya nezviratidzo nekuti vanonzwa vane mhosva kana kuti neimwe nzira vakundikana mudiwa wavo pavanobvuma kuti kutarisira kwakanyanya kuoma.
Zvimwe zvezviratidzo zvikuru zvekuchengetwa kwevachengeti zvinosanganisira kuwedzera kushatirwa, kushomeka kwekutarisa, hunhu hwakawanda hwekukanganisa, zvikanganiso pabasa, hukama hwakakanganisika, uye kunetseka kurara, zvinoenderana Michael G. Mamiriro ekunze , Psy.D, chiremba wezvepfungwa uye mumwe uye neAmerican Psychotherapy Association.
Muzviitiko zvakanyanya, muchengeti aneta anokwanisa kutungamira mukushusha. Kana iwe uchinzwa kuti ungangopopota neimwe nzira, zvingave zvakanaka kuti uzvibvise iwe kubva kumamiriro acho kusvikira iwe wawana rubatsiro kugadzirisa mamiriro acho zvakachengeteka.
Zvimwe zviratidzo zvekushaiwa simba zvakafanana zviratidzo zvekuora mwoyo, sekureva kweMayo Clinic. Izvi zvinosanganisira:
Kazhinji kunzwa kuneta
Kuchinja kwemaitiro ekurara
Kuwana kana kurasikirwa uremu
Kupera kufarira zviitwa zvawaimbofarira
Kugara uchirwadziwa nemusoro, kurwadziwa mumuviri, kana zvimwe zvinetso zvehutano hwepanyama
Kunzwa kwekushaya rubatsiro kana kusava netariro
Hasha, kubviswa munharaunda, uye kutsamwa
Zvisinei, pane musiyano pakati pekushungurudzika nekupererwa nemutarisiri, sekureva kwaDr Wetter: Kupererwa nemutarisiri kwakabatana uye kwakakonzeresa zvakanyanya nekuda kwekuzvitarisira kwakashata; inofanoonekwa uye inogona kudzivirirwa. Iko kusanganiswa kwezviratidzo zvinoratidzira kubva mumuviri nepfungwa kuwedzererwa. Pane imwe nguva yakapihwa 'kurapa' kana 'kupora,' munhu anogona kutangazve kuita kwakajairika. Kushungurudzika chirwere chinoda kurapwa. Iyo inogona kuverengerwa kune yekunze kana yemukati zvinokurudzira. Kushungurudzika kunogona kutora nguva kuti kugadziriswe uye kunowanzo kuve kwakanyanya mukuratidzira kwayo.
Kuneta kwevanochengeta kunowanzo sanzwisiswa sekunzwa kuneta zvakanyanya kana kuneta, asi muchengeti kuneta kunonyanya kuneta kuzere kunokanganisa nzvimbo zhinji dzehupenyu. Nekuti kupererwa nemutarisiri kunogona kukanganisa zvikamu zvakawanda zvehupenyu hwako, dzimwe nguva zvinofanirwa kutsvaga rubatsiro rwehunyanzvi. Sekureva kwa Dr. Wetter, iwe unofanirwa kusvika kune wekuchengetedza hutano kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waona zviratidzo
Chimwe chezvikonzero zvinotungamira zvevachengeti kuneta kushaya kuzvitarisira. Kana kuchengetwa kuri kwekugara, zvinogona kuva zvakaoma kufunga nezvako. Edza aya matipi kuti urege kuneta kwevanochengeta:
Tora maminitsi gumi mangwanani oga oga. Ino nguva inogona kushandiswa kutambanudza, kufungisisa, kunakidzwa nekapu yekofi, kana kugara wakanyarara.
Gamuchira izvo zvausingagoni kudzora. Kuneta kunogona dzimwe nguva kuitika nekuti unonzwa kushaya basa. Gadzira rondedzero yezvinhu zvaunogona kudzora, sekudya chikafu chine hutano kana kupedza maminetsi gumi panze zuva rega rega. Gadzira runyorwa rwezvinhu iwe haikwanise kudzora, senge hutano hwemudiwa wako. Tarisa pane zvinhu iwe unokwanisa dzora uye shandira pakugamuchira izvo zvinhu zvausingagone. Dzimwe nguva iwe haugone kusangana nezvinodiwa zvemudiwa- uye izvo zvakanaka. Mune aya mamiriro, iwe ungangoda kutendeukira kune yekuchengetedza imba agency, kune hunyanzvi nzvimbo yekuyamwisa, kubatsirwa kurarama, nezvimwe.
Dzidzira kutenda. Zvinogona kunge zvakaoma kutenda mazuva aunenge wakaneta uye uchida kugara pasi kwemaminitsi mashanu, asi kutarisa pane izvo zvakanaka kunogona kubatsira kurwisa kushushikana.
Teerera kune ako ehutano nyaya. Vazhinji vanochengeta vanosvetuka nguva dzakagadzwa nachiremba, kuongororwa kwehutano, uye bvunzo dzekuongorora nekuti vanotora nguva kure nemabasa avo evachengeti.
Kana iwe uri wega kana muchengeti wekutanga, nzira yakakosha yekudzivirira kupera simba ndeyekuunganidza vamwe mukuedza kwako. Gadzira rondedzero yenzira dzinogona kubatsira vanhu, senge kutenga chikafu, kupa zororo, kumhanyisa nzendo, kubika chikafu, kana kuendesa hama yako kwachiremba kana kunodya. Svitsa kune shamwari nehama kuti ubvunze kana vari kuda kubatsira, kunyangwe kweawa pavhiki. Vanhu vangave vachida kwazvo kuti hungu kune chaicho chikumbiro kana kusarudza kubva akati wandei, pane kune zvisina kujeka, Unogona kubatsira here?
unogona here kubvisa uti kumba
Kana iwe usina shamwari kana hama dzinogona kukupa zororo (kana kunyangwe iwe uchidaro), kune zvirongwa munzvimbo yako izvo zvinogona kupa rubatsiro rwepfupi-pfupi kune vanochengeta. Svika kune mamwe emasangano anogona kupa rutsigiro:
AARP Kuchengetedza Resource Center
ARCH Yenyika Yese Kuramba Network
Mubatanidzwa weNyika yeKuchengeta
Muchengeti Action Network
Muchengeti Anotsigira Services
Mhuri Yekuchengeta Mubatanidzwa
VA Muchengeti Kutsigira
Izvo zvakare zvakakosha kumisikidza miganho kuti uzvibvumire iwe inokwana ini nguva, sekureva kwa Dr. Wetter. Anoratidza zvakare,kuita zviitiko kana zvekuvaraidza zvaunowana zvinonakidza uye usabatana zvakananga nemabasa ekuchengeta, semuenzaniso, kukwiza muviri, zuva re spa, kuenda kubhaisikopo, kuenda kumuseum, kuverenga bhuku rakanaka, kana kuenda neshamwari. Gadzira runyorwa rwezvinhu iwe zvaungade kuita izvo zvinotora ingangoita awa imwe kana maviri, saka kana iwe uine nguva yako wega, iwe unotora mukana wekuzorora.
Unobata sei kunetseka kwemuchengeti?
Iko hakuna kurapa chaiko kune muchengeti kunetseka uye kuneta. Nzira yakanakisa yekurwisana nayo ndeyekutsvaga nzira dzekusiya nguva yakakwana muzuva kuti utarise pauri, idya chikafu chakaringana, kurovedza muviri, uye kurara zvakakwana. Kunyangwe izvi zvingave zvakaoma, pane matanho iwe aunotora kutora kudzikisira epanyama uye nemanzwiro emabatiro ekuchengeta nzvimbo kwauri.
Shanda nemupi wezano wezano kuti udzidze kugadzira chikafu chakaringana-chinokodzera nguva yako uye simba rekudzivirira. Inishuwarenzi yehutano dzimwe nguva inovhara kuraira kwekudya zvinovaka muviri, saka bvunza wako wekutanga kutanga.
Joinha boka renzvimbo rekutsigira. Bata yako yemunharaunda Area Agency pane Kuchembera kuti uone kana paine boka rekutsigira munzvimbo yako. Iwe unogona zvakare kutarisa mamwe epamhepo ekutsigira mapoka. Kune akatiwandei Facebook anotarisira mapoka ekutsigira:
Dementia Vanochengeta Vanotsigira Boka
Vano chengeta Hub Rutsigiro Boka
Muchengeti Anotsigira Nharaunda
Kutaura kune vamwe vanhu vanochengeta kunogona kusunungura manzwiro ekusurukirwa uye nekupa kubatana kunodiwa nevamwe. Mapoka ekutsigira anokupawo nzvimbo yekuburitsa, kugovana zviwanikwa, nekukurukura matambudziko pamwe nenzvimbo yekugovana nekudzidza hunyanzvi hwekuita.
ndingaenda here kuna chiremba ndisina inishuwarenzi yehutano
Kumbira rubatsiro. Taura neshamwari uye nemhuri uye ita zvikumbiro chaizvo zvekubatsirwa. Iwe ungangoda kuti mumwe munhu amhanye mhanya kana mumwe munhu kuti agare newako mudiwa iwe uchibuda mumba. Usatya kukumbira zvaunoda. Panogona kunge paine vanhu vazhinji vaunoziva vanogona kunge vachida kubatsira asi vasingazive kuti unoida.
Sanganisa kurovedza muviri mune zvako zvezuva nezuva. Exercise yakaratidzirwa kuvandudza hutano, kuwedzera yako yakazara pfungwa yehupenyu, kudzikisira kushushikana, uye kuwedzera mweya. Chero kurovedza muviri, sekufamba, kukwira masitepisi, kumhanya, kuchovha bhasikoro, yoga, kurima gadheni, kana kushambira. Tora nguva zuva rega rega kurovedza muviri. Kunyangwe iyo U.S. Hofisi Yekudzivirira Zvirwere uye Kusimudzira Hutano inoratidza maminetsi zana nemakumi mashanu pasvondo rekurovedza muviri, unogona kunzwa zvakanakira nezvishoma. Maminetsi mashanu eerobic kurovedza muviri anogona kukurudzira anti-kushushikana mhedzisiro, uye kufamba kwemaminetsi gumi kunogona kunge kwakangofanana ne45-miniti imwe yekubvisa kushushikana uye kushushikana zviratidzo zvinoenderana Kuzvidya Mwoyo uye Kushungurudzika Sangano reAmerica .
Taura kune wehutano kana wepfungwa nezve nzira dzekudzora kushushikana. Varapi vanogona kupa munhu asingasaruri, asingapi mhosva kuti ataure nezve manzwiro auri kuita. Vanogona zvakare kupa anoshanda, ekuderedza kushungurudzika, senge kufema kwakadzika uye kufungisisa, zvaunogona kuita mukati mezuva rako rese kudzikamisa kushushikana. Nyanzvi yehutano hwepfungwa inogona kuona kana iwe uri panjodzi yekuvandudza kushushikana semhedzisiro yemuchengeti kuneta uye kupa nzira dzekurapa kune vakashungurudzika kana zvichidikanwa.
Kuchengeta, kunyanya kana urikuchengeta mumwe munhu akambokuchengeta, kunounza manzwiro akaomarara, anodaro Heather Tuckman, Psy.D, chiremba wezvepfungwa muchiitiko chega muWest Chester, PA. Vanhu dzimwe nguva vanoona zvichinetsa kutaura nezve kushushikana kwavo kana chigumbu pamusoro pekuchengetwa nekuti vanoona sekutengesa kumunhu ari kuchengetwa…. Murapi anopfuura munhu wekutaurira asi anova mumwe wako mukushanda kuburikidza nemanzwiro akaoma anouya nekuchengeta munhu waunoda.
Iwe unoda zuva rehutano hwepfungwa here? Heino nzira yekuziva.
Mhuri yekuchengeta bhokisi rekushandisa
Kuzvichengeta-wega kune muchengeti
Chii chinonzi meloxicam uye chii chinoshandiswa?
Chii chekubvunza chiremba pane yakanaka-mwana cheki
chii chiri chakazara tembiricha yemuviri fahrenheit
chii muzana chedu chakanyanya kufutisa
ko kana ndikatora tamiflu uye ndisina flu
mashuga eropa anofanirwa kuvei
unogona here kutora tylenol 3 ne ibuprofen
kwenguva refu mhedzisiro mhedzisiro yealuteruter inhaler